အလုပျတှေ အဆငျပွပွေီး အရငျထကျနုပြို လှပလာရတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ ကို ပွောပွလာတဲ့ မကေဗြာ – GaMone Media
By Ga MonePosted on May 27, 2022
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ ညိုစိမျ့စိမျ့အသားအရညျလေးနဲ့ မွနျမာဆနျဆနျလှပသူလေး မကေဗြာကတော့ ခန်ဓာကိုယျသေးသေး သှယျသှယျလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးနှလုံးကို သိမျးပိုကျထားနိုငျသူပါ။ အခုဆိုရငျ အသကျလေးဆယျနီးပါးအရှယျကို ခဉျြးကပျနပွေီဖွဈတဲ့ မကေဗြာက လူငယျတှနေဲ့ယှဉျနိုငျအောငျ အရမျးနုပြိုပွီး ခတျေဆနျသူလေး တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပီပီ ပရိသတျတှရေဲ့အမွဲတမျးအားပေးမှုကို အခုခြိနျထိပိုငျဆိုငျထားသူပါ သူမဟာ အသကျအရှယျ အရ လေးဆယျကြျောနပေမေဲ့ နုပြိုမှုကတော့ ဆယျကြျောသကျလေးအတိုငျးပါပဲ အနုပညာအလုပျတှရေပျနားထားရတာကွောငျ့ အှနျလိုငျးကနေ ကုနျပစ်စညျးလေးတှေ ရောငျးခနြတောပဲ ဖွဈပါတယျ အခုလို သူမလုပျသမြှကိစ်စတိုငျး အဆငျပွအေောငျမွငျနရေတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြလေးကိုအခုလိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျ
အဓိဌာနျ ၉ ရကျပွညျ့ နစေ့ဉျကုသိုလျ အဓိဌာနျ ကဗြာ့၏အားကိုးရာ…. ဘာလျို့အလုပျတှအေဆငျပွလေဲ…. ဘာသာရေးလုပျလို့ဘာလျို့ လှလာတာလဲ…..ဘာသာရေးလုပျလို့ဘာလို့ နုနတောလဲ… ဘာသာရေး လုပျလျို့ဘာလို့ရောငျးကောငျးနတောလဲ….ဘာသာရေးလုပျလို့ ကဗြာ့ကိုမေးတဲ့ မေးခှနျးတိုငျးရဲ့အဖွလေေးပါ ကဗြာဘာသာရေးကိုအကြိူးမမြှျောပဲ ယုံကွညျစှာ သိတတျတဲ့အရှယျမှစ အခုမအားတဲ့အခြိနျထိ အချြနျပေး မပကျြမကှကျ လုပျလျို့ပါ ဆိုပွီး ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျနျော
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ညိုစိမ့်စိမ့်အသားအရည်လေးနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်လှပသူလေး မေကဗျာကတော့ ခန္ဓာကိုယ်သေးသေး သွယ်သွယ်လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူပါ။ အခုဆိုရင် အသက်လေးဆယ်နီးပါးအရွယ်ကို ချဉ်းကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ မေကဗျာက လူငယ်တွေနဲ့ယှဉ်နိုင်အောင် အရမ်းနုပျိုပြီး ခေတ်ဆန်သူလေး တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပီပီ ပရိသတ်တွေရဲ့အမြဲတမ်းအားပေးမှုကို အခုချိန်ထိပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ သူမဟာ အသက်အရွယ် အရ လေးဆယ်ကျော်နေပေမဲ့ နုပျိုမှုကတော့ ဆယ်ကျော်သက်လေးအတိုင်းပါပဲ အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားရတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းချနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် အခုလို သူမလုပ်သမျှကိစ္စတိုင်း အဆင်ပြေအောင်မြင်နေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်
အဓိဌာန် ၉ ရက်ပြည့် နေ့စဉ်ကုသိုလ် အဓိဌာန် ကဗျာ့၏အားကိုးရာ…. ဘာလ်ို့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလဲ…. ဘာသာရေးလုပ်လို့ဘာလ်ို့ လှလာတာလဲ…..ဘာသာရေးလုပ်လို့ဘာလို့ နုနေတာလဲ… ဘာသာရေး လုပ်လ်ို့ဘာလို့ရောင်းကောင်းနေတာလဲ….ဘာသာရေးလုပ်လို့ ကဗျာ့ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းရဲ့အဖြေလေးပါ ကဗျာဘာသာရေးကိုအကျိူးမမျှော်ပဲ ယုံကြည်စွာ သိတတ်တဲ့အရွယ်မှစ အခုမအားတဲ့အချိန်ထိ အခ်ျန်ပေး မပျက်မကွက် လုပ်လ်ို့ပါ ဆိုပြီး ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်နော်
Previous post ဘဝ နဲ့ ရငျးပွီးရခဲ့တဲ့ သငျခနျးစာ တှကေို ပွောပွလာတဲ့ အဆိုတျော တှငျကယျလျ
Next post ရငျခုနျစရာ အလှတရားတှေ အပွညျ့ နဲ့ ပို့ဈလေးတှေ မြိုးစုံပေး ကာ မိမိုကျ လှနျးနတေဲ့ စူးရှထကျ